Galii faankishiniin qaama tokko
Toorri kun galii faankishinii herreegaaLibreOffice Calc. of keessaa qaba.
Kanfaltii yeroo yeroon ta'u keessatti dhala kennaa ittisaa shallaga.
Kennaan guyyaa kennaa ittisaati.
Dhalli jalqabaa guyyaa dhala jalqabaa ittisaati.
Kuufamni guyyaa dhalli kennaa haga yeroo sanaatti dabalu shallaga.
Nageenyinnaa 2001-02-28 irratti kenname. Dhalli jalqabaa 2001-08-31 tiif qindaa'a. Gyyaan buufata 2001-05-01 dha. Saffisni 0.1 ykn 10% fi Pariin safartoota sirrii 1000 dha. Dhalli walakkaa waggaatti kanfalama (ammamtaan 2). Bu'uurri mala US ti(0). Dhala hagamtu kennama?
=ACCRINT("2001-02-28";"2001-08-31";"2001-05-01";0.1;1000;2;0) 16.94444 deebisa.
Makkiin makkii noominaala waggaa dhalaati.
Ittisni 2001-04-01 irratti kenname. Guyyaan bilchinaa 2001-06-15 tiif qindaa'a. Saffisni 0.1 ykn 10% fi Paariin safartoota sirrii 1000 dha. Shallaggiin bu'uura guyyaa/waggaa baalaansii guyyaa (3) ta'a. Dhala hagamiitu argame?
=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0.1;1000;3) 20.54795 deebisa.
Yeroodhaaf depireeshinii akka appoortayizeeshinii degreesiviitti shallagi. AMORLINC malee, coffishantiin dipreeshinii asitti fayyada.
Gatiin argamsa gatiiti.
Guyyaan gurgurtaa guyyaa barbaadamuudha.
Yeroon duraa dhuma guyyaa yeroo duraatti.
Kan balaarraa hafe gatii kaapitaalaa isa balaarraa hafee ta'a.
Yeroon kuusama yeroo ti.
Maakkiin dipireeshinii maakiti.
Hamma dipireeshinii kuusama yerootiif akka ammoortizeeshiniitti shallaga.Yoo caapitaalli yeroo kuufamaatti bitame,hangi prooporshinii dipirisheeshinii ilaalcha keessa gala.
mala artimeetikii-kuffiisuu fayyadamuudhaan yeroo adda ba'eef dippirisheeshinii qabeenyaa keenna.
Yoo jalqaba dippirisheeshinii irratti(akka faallaa dippirisheeshinii sorooroo ta'etti) gatii dippiakkrisheeshii guddaa yoo barbaadde unki dippirisheeshinii kun ni fayyadamama.Gatiin dippirisheeshinii dippirisheeshinii gatii jalqabaa irraa xiinxalameetiin yeroo dippirisheeshinii hunda waliin hir'ata.
Jiruun yerootti qabeenyi kuufamu ibsa.
Yeroon dheerina tokko tokkoo yeroo dha. is the length of each period. Turtiin akkuma yeroo dippirisheeshiniiti safartuu aduu walfakkatuun seenuu qaba.
Jiini (dirqalee) dippirisheeshinii waggaa jalqabaaf lakkoofsa ji'ootaa bakka bu'a. Yoo galiinsi hin ibsamne ta'e, 12 akka durtiitti fayyada.
Gatii dippirisheeshinii jalqabaa olaanaa faallaa dippirisheeshinii liinarii ta'e yoo barbaadde unka kana fayyadami. Tokko tokkoo yerootti gatiin dippirisheeshinii hir'achaa deema dabalataanis bittaa booda qabeenyota kasaaraan gatii isaanii guddaa ta'eef (fakkeenyaaf, konkolaattota,kompiiyuutaroota) yeroo hunda fayyada.Maaloo gosa shallagii kana jalatti gatiin buukii gonkuma akka zeeroo hin taane hubadhu.
Gatiin gatii qabeenya jalqabaa murteessa.
Salveejiin gatii qabeenyaa dhuma jireenya isaa irrati murteessa.
Jiruun lakkoofsa yeroo qabeenyi yeroo hammamiif akka fayyadamamuu qabu ibsudha.
Yeroon turtii yeroo kan gatiin shallagamuuf ibsa.
Hirmaataan (dirqalee) hirmaataa dippirisheeshiniin ittiin hir'atudha.Yoo gatiin hin seenne ta'e, durtiin hirmaataa 2 dha.
Sirni kompiiyuutaraa gatiin isaa jalqabaa safartuu maallaqaa 75,000 ta'e ji'a ji'aan waggaa 5 oliif kuufamuu qaba.
Safartuu maallaqaa=DDB(75000;1;60;12;2) = 1,721.81. Kanaafuu, dippirisheeshiniin lama-kuffiisuu bittaa booda ji'a jalqabaa keessa safartuu maallaqaa 1,721.81 dha.
Hayyama (hir'ina gatii) ittisaa akka dhibbantaatti shallaga.
Gatiin gatii ittisaa safartuu maallaqaa 100 keessaa kan gatii pariidha.
Mugoota Kanfaluun gatii mugoota kanfaluu ittisaa safartuu maallaqaa 100 keessaa kan gatii 'par'iidha.
Ittisni gaafa 2001-01-25 bitame; guyyaan bilchinaa 2001-11-15. Gatii (gatiin bittaa) 97 dha, gatiin mugoota kanfaluu 100 dha. Shallaga guyyaadhaan madaaluu (hundee 3) fayyadamuun qubannoon (hir'inni gatii) hammam guddataa?
=DISC("2001-01-25";"2001-11-15";97;100;3) waa'ee parasantii 0.0372 ykn 3.72 deebisa.
Turmaata ittisa dhaalaa dhabbataa waggaa keessaa shhallaga.
Boonoon boonoo reetii dhalaa waggaa (reetii dhalaa xiqqaa) dha.
Ittisni gaafa 2001-01-01 bitame; guyyaan bilchinaa 2006-01-01. Boonoon reetii dhalaa 8% dha. Kennuun 9.0% dha. Dhalli walakkaa waggaadhaan kaffalama (ammamtaan 2 dha). Shallaga dhala guyyaadhaan walmadaaluu (hundee 3) fayyadamuudhaan turmaatni hammamii?
reetii dhalaa xiqqaadhaaf reetii dhalaa waggaa culkee keenna.
Dhalli xiqqaan hamma dhalaa sababa dhuma yeroo shallagaatiin argame ibsa.Dhalli bu'aa qabeessi lakkoofsa kaffaltii raawwatame waliin dabala.Karaa biraatiin, dhalli dhuma yeroo shallaggiin dura qabdiidhaan kaffalama (fakkeenyaaf, ji'a ji'aan ykn kurmaanaan).
Nom dhala xiqqaadha.
Pn lakkoofsa yeroo kaffaltii dhalaa waggaa tokko keessaadha.
Osoo reetiin dhala xiqqaa waggaa 9.75% fi yeroon shallaga dhalaa afur ibsaman, reetii sirriin dhalaa (reetii bu'aa qabeessi) maalii?
Reetii dhalaa xiqqaa fi lakkoofsa kaffaltiiwwan dhalaa 'annum' tokko keessaa irratti hundaa'uudhaan reetii dhalaa waggaa bu'aa qabeessa shallaga.
EFFECT_ADD(Reetii Xiqqaa; NPerY)
Reetii Xiqqaan reetii dhalaa xiqqaa waggaati.
NPerY iin lakkoofsa kaffaltii dhalaa waggaattii dha.
Reetii xiqqaa 5.25% fi kaffaltii kurnaalaaf reetii dhalaa waggaa bu'aa qabeessaa maali.
=EFFECT_ADD(0.0525;4) 0.053543 ykn 5.3543% deebisa.
Hanga fudhatame kan dhala dhaabataa tiif kanfalame pooyintii kenname irratti shallaga.
Inveestimeentiin ida'a bittaati.
Guyyaa kuufamaa:Amajjii 15 1999, guyyaa bilchinaa:Caamsaa 15 1999,ada'ama inveestimentii: 1000 yuunitii maallaqaa, hir'ina gatii: 5.75 per saantima, bu'uura: Baalaansii guyyaa guyyaan/360 = 2.
Guyyaa bilchinaa irratti hanga fudhatame akka armaan gadiitti shallagama:
=RECEIVED("1999-02-15";"1999-05-15";1000;0.0575;2) 1014.420266 deebisa.
Kaawwatiidhaaf reetii deebii keessoo shallaga. Gatiiwwan gatii callaa giddu'uu idileedhaan bakka buusa, yoo xiqqaate gatiin tokko negetiiva ta'uu qaba (kaffaltiiwwan), fi yoo xiqqaate gatiin tokko pozatiiva ta'uu qaba (galii).
Gatiiwwan waraantoo gatiiwwan qabatu bakka bu'a.
Tilmaamni (dirqalee) gatii tilmaamamedha.Malli aytireetiivii reetii deebii keessoo shallaguuf fayyada.Yoo gatiiwwan xiqqoo qofa dhiheessuu dandeessa ta'e,aytireeshinii kakaasuuf tilmaama dursaa dhiheessi.
Tilmaama qabeentoonni mandhee A1=-10000, A2=3500, A3=7600 fi A4=1000, foormulaan =IRR(A1:A4) firii 80.24% kenna.
Qadiiwwan baasii jala jalaa hin jijjiiramneef sadarkaa dhalaa shallaga.
ISPMT(Reetii; Yeroo; YeroowwanDimshaashaa; Investii)
Reetiin reetii dhala irra deddeebii qindeessa.
Yeroon lakkoofsa qabdiiwwanii dhala shallaguudhaaf gargaarudha.
Irradeddeebbii Dimshaashaa lakkoofsa dimshaashaa yeroowwan qabdiiti.
Investiin hamma invetimentiiti.
Hamma liqaa safartuu maallaqaa 120,000 termii waggaa lamaanii fi qabdiiwwan ji'a ji'aan, reetii dhalaa waggaa waggaadhaan 12% ta'eef sadarkaan dhalaa waggoota 1.5 booda ni barbaadama.
=ISPMT(1%;18;24;120000) safartuuwwan maallaqaa= -300 . Waggoota 1.5 booda dhalli ji'a ji'aanii safartuuwwan maallaqaa 300 ta'a.
Gatii ammee inveestimeentii kan kanfaltii yeroo hundaa irraa argame deebisa.
Faankishinii kana hamma qarshii makkii dhaabataa har'a inveestiidhaaf barbaashisu shallaguuf fayyadamaa,hanga murtaa'e fudhachuuf,lakkoofsa yeroo murtaa'e irratti.Yeroo muraasaan booda qarshii hanga hafe murteessuu ni dandeessu.Yoo hangi kanfalame jalqaba irratti ykn dhuma irratti adda baasa.
Gatii kana akka lakkoofsotaatti,ibsaatti ykn akka wabiitti galchaa.Yoo, fakkeenyaaf,dhalli waggaatti 8% kanfalame,garuu yoo ji'a akka yeroo keessaniitti fayyadamuu barbaaddan,8%/12 makkii jala galchuufiLibreOfficeCalc batalumatti faaktarii sirrii shallaga.
Makkiin makkii dhalaa per yeroo ibsa.
NPern lakkoofsa ida'ama yeroowwaniiti (yeroo kanfaltii).
Pmtkanfaltii yeroo hundaa yeroo tokkotti hojjatamuudha.
Gosa (filannoo) kanfaltiidhaaf guyyaa dhumaa bakka bu'a.Gosa = 1 jechuun yeroo jalqabaa fi gosa= 0 (durtii) jechuun yeroo jalqabaa.
Gatiin inveestimeentii ammaa hagam,yoo 500 yuunitii maallaqaa ji'aan kanfalame fi makkiin dhala waggaa 8%?Yeroon kanfaltii ji'a 48 fi 20'000 yuunitii maallaqaa dhuma yeroo kanfaltii irratti hafa.
=PV(8%/12;48;500;20000) = -35,019.37 uunitii maallaqaa.Haala maqaa jalatti,dirqama har'a 35,019.37 uuniitii maallaqaa kuusuu qabdu,yoo 500 yuunitii maallaqaa per ji'aa ji'a 48 tiif fudhachuu barbaadan fi 20,000 uuniitii maallaqaa dhuma irratti lafatti hafa.Mirkaneessi qaxaamuraa kan agarsiisu 48 x 500 yuunitii maallaqaa + 20,000 uuniitii maallaqaa = 44,000 uuniitii maallaqaa. Garaagarummaan kana gidduu jiruu fi kuufamni 35,000 yuunitii maallaqaa dhala kanfalame bakka bu'a.
Osoo wabii iddoo gatii kanaa foormulaa keessa galchinee,lakkoofsa barbaadde "If-then"mul'inoota shallaguu dandeessu.Maaloo hubadhaa:wabiin dhaabataaf akka wabii guutuutti dirqama ibsamuu qaba.Fakkeenyi akkanaa kun faankishinii diprisheeshinii jalatti argama.
Makkii diprisheeshinii lakkoofsa hir'atee deebisa.
Hanga diprisheeshinii yeroo tokkoo kan waliigala diprisheeshinii wantoo shallaguuf faankishinii kana fayyadamaa.Hir'ina lakkoofsaa diprisheeshinii hanga diprisheeshinii yeroodhaa yerootti ida'ama dhaabaaadhaan hir'isa.
SYD(Gatii;saalveegii; Jireenya; yeroo)
Balaarraa kan hafe jechuun gatii waan nafii qabuu dippirisheeshinii boodaati.
Jiruun yeroo,yeroo turtii irratti qabeenyi dullatoomu murteessudha.
Yeroon yeroo dullatoomni shallagamuu qabu ibsa.
Sirni viidiyoo duraan Maallaqa 50,000 ta'e waggoota dhufan 5f waggaa waggaadhaan dullatoomuu qaba.Gatiin wanta balaarraa hafee maallaqa 10,000 ta'uu qaba.Waggaa jalqabaaf dippirisheeshinii shallaguun si barbaachiisa.
=SYD(50000;10000;5;1)= maallaqa 13,333.33 Waggaa jalqabaaf ammi dippirisheeshiniia maallaqa 13,333.33 dha.
Ilaalacha gubbaa reetii dippirisheeshiniia yeroo tokkoon qabaachuuf, gabatee dippirisheeshiniia qindeessuun gaariidha.Foormuloota dippirisheeshiniia garaagaraa jiran LibreOffice keessa tokko isa tokkoon booda galchuun, unka dippirisheeshiniia isa kamtu hundarra filatamaa akka ta'e ilaaluu ni dandeessa. Gabatee akka armaan gadiitti galchi.
safartoota mahaalaqaa 10,666.67
Foormulaan F2 keessaa akka armaan gadiiti.
Foormulaan kun tarjaa E keessa gara gadiitti hanga E12 tti baay'ifama(E2 filadhu,sana booda xiyyoo mirgaa handaara gadii tuqaadhaan gad harkisi).
mandheen E13 foormulaa hamma dippirisheeshinii hunda mirkaneessuuf gargaaru of keessatti qabata.Akka gatiin negatiivii E8:E11 keessa jiru yaada keessa hin galleef faankishinii SUMIF fayyadama.Haalli >0 mandhee A13 keessatti hammatameera.Foormumlaan E13 keessaa akka armaan gadiiti.
Amma dippirisheeshinii waggaa 10 agarsiisi,ykn gatii wanta balaarra hafee maallaqa 1 irratti, ykn gatii jalqabaa garaagaraa galchi, fi itti fufa.
Faankishinoota Maallaqaa Kutaa Lammaffaa
Faankiishinoota Maallaqaa Kutaa Sadaffaa
Title is: Galii faankishiniin qaama tokko